SIERRA KATOW သည် HARVARD မှဟားဗတ်သို့တက်ရောက်ရန်ရယ်စရာအကောင်းဆုံးရုပ်ပြဖြစ်သည် - နှုန်းထားများ
ဟားဗတ်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာသမ္မတတွေ၊ သံတမန်တွေ၊ အသုံးအများဆုံးသောပြင်းအားများသည်အစိုးရနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံများဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောကျောက်မျက်တစ်ခုမှာကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ La Cañadaမှအသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Sierra Katow ဖြစ်သည်။
သူမ၏သိပ္ပံအာရုံစူးစိုက်မှုသင်အရူးမခံပါနဲ့။ သူမသည် Conan ကတည်းကဟားဗတ်သို့တက်ရောက်ရန်ရယ်စရာအကောင်းဆုံးလူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည် stand-up လူရွှင်တော်ဖြစ်ပြီး Last Comic Standing တွင်ပင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
သင်ဘယ်လို stand-up ဟာသသို့ရခဲ့တာလဲ
ငါအသက် ၁၆ နှစ်မှာအထက်တန်းကျောင်းပထမနှစ်စတင်ခဲ့တာ။ သင်ဟာမတ်တပ်ရပ်ပြီးဟာသလုပ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်၊ ဘယ်သူမှမင်းကိုကြိုတင်မကြည့်မရှုနိုင်၊ မင်းကိုစာရင်းစစ်မယ့်နေရာတွေမှာပွင့်လင်းတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ အားလုံး, ကကိုယ့်ကိုကိုယ်စတိုင်လုပ်ပါ။
တစ်နေ့ကျရင်ငါလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းအနည်းငယ်ကိုသွားပြီးလှည့်ပတ်သွားတယ်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ဝါသနာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ငါဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတခြားသူတွေကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကထွက်ထက်ကောလိပ် setting တွင်ဖျော်ဖြေဖို့အများကြီးပိုပြီးအခွင့်အလမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာလေးစားမှုအတွက်ကောင်းပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ဟားဗတ်၌ရှိသည့် stand-up ဟာသမြင်ကွင်းကဘာလဲ?
တကယ်ကိုအေးဆေးပဲ။ ၎င်းဒေသ၏အဓိကအကျဆုံးareaရိယာမှာဟားဗတ်ကောလိပ် Stand-Up ရုပ်ပြအသင်း၊ HC SUCS ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကန ဦး ကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ပထမတန်းကျောင်းသားအဖြစ်ဝင်ရောက်ကတည်းကကတည်းကကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့သူငယ်ချင်းအဲလက်စ် Iascone နှင့်အတူပူးတွဲ run ။ ဤနေရာတွင်ကျောင်းသားများဖြစ်နိုင်သည့်တက်ကြွသောလူရွှင်တော်များမပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းကိုစိတ်ဝင်စားသူများစွာလည်းမပါဝင်ပါ။
ကျနော်တို့သိပ္ပံစင်တာပို့ချခန်းမထဲမှာတစ်လတစ်ကြိမ်ဒီမှာပြသပါ။ အဲဒီအသိုင်းအဝိုင်းအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Stand-up ဟာသသည်ကျောင်းဝင်းရှိအခြားအရာများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့် တွဲဖက်၍ ရသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အချို့သောကျပန်းအကပွဲများအတွက်ဖွင့်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောထူးခြားမှုကိုပေးသည်။
ငါအမျိုးမျိုးပြပွဲအလယ်၌ပစ်ချပါလိမ့်မယ်, သင်တစ် ဦး အလွန်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အစမ်းလေ့ကျင့်ခုန်လိမ့်မယ်, ပြီးတော့ငါသွားနှင့်လုံးဝအတန်းအဆင့်ကိုအနည်းငယ်ဖြုတ်ချပါလိမ့်မယ်။ အခြားဖျော်ဖြေပွဲတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးဒီနေရာမှာစင်ပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ကျောင်းသားပရိသတ်တွေဟာအမြဲတမ်းအေးအေးဆေးဆေးရှိနေကြတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။
ငါမသိဘူး။ ငါအရာတွေအများကြီးထွက်ဖလှယ်။ ငါတိုတောင်းသောနောက်ပြောင်သောပြက်လုံးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဤအချက်မှာအမြဲတမ်းကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်။ ငါအမြဲစူပါအတွေးအခေါ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ငါအကြောင်းပြောနေတာငါအဘယ်အရာကိုငါတကယ်မသိသောတစ် ဦး ပွိုင့်အကြောင်းပြောဆိုရန်စိတ်ပူခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်လူရွှင်တော်ဖြစ်ခြင်း၏အချက်ကျိန်းသေရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးဘ ၀၊ ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်း၊ အာရှ - အမေရိကန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တူသောအရာ၊ အမျိုးသမီးလူရွှင်တော်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တူသောအရာသည်ကျွန်ုပ်အကောင်းဆုံးသိသောအရာကိုမှီဝဲခဲ့သည်။ ဒီလိုသေးငယ်တဲ့အရာတွေ။ မိသားစုပစ္စည်းကအမြဲပျော်စရာကောင်းတယ်။ ငါလှည့်ကွက်ဟာသကြိုက်တယ်။
အခြားလူများကမူကျွန်ုပ်သည်အဆင်မပြေသေးသောအယောင်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ပြုမူပြောဆိုခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်၊ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ရှည်လျားသောပုံပြင်များသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းထက်စာရေးခြင်းပြက်လုံးများနှင့်ထိုပြက်လုံးများကိုကပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါကသေးသေးဘာမှမှသော့ခတ်ချင်လျှင်ငါမသိရ။
ဟုတ်တယ် အဲဒီမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လူရွှင်တော်တွေဒီလောက်များများစားစား။ LA မှာဖျော်ဖြေနေတုန်းမှာငါအများကြီးတွေ့တယ်။ အဲ့ဒီ့လူတွေကလူသိနည်းတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကိုမြင်ပြီးသူတို့တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျတယ် ' အဓိကစီးကြောင်းသို့မဟုတ်မီးမောင်းထိုးပြခြင်း၌သေချာပေါက်မနေပါနှင့်။ ၎င်းသည်ချိုးဖောက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းအတွက်, ငါသူတို့နေဆဲတကယ်ကောင်းသောနေသောထောင်ပေါင်းများစွာထဲကသူတို့အဆင့်အထိရတယ်သောသဘော, ငါလူသိများနေသောလူရွှင်တော်အားလုံး idolize ထင်, ဒါကြောင့်သူတို့ကယ့်ကိုတကယ်ကောင်းသောဖြစ်ရပါမည်။
ငါကလူရွှင်တော်တွေအများကြီးကိုကြည့်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုပ်တာကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်မေီ Schumer အခုအချိန်မှာကြီးမားသည်။ သူမရဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေကသူမရဲ့ပုံကြမ်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ အဲဒီမှာဟာသတစ်ခုဘက်စုံသုံးကြည့်ဖို့အေးမြပါတယ်။
ငါလူများစွာအမှန်တကယ်သိကျွမ်းသောနာမည်ကြီးများဖြစ်သောလူးဝစ် C.K. နှင့်ကီဗင်ဟတ်စာရာ Silverman၊ Aziz Ansari၊ Margaret Cho တို့၏ပရိသတ်ကြီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့တစ်တွေအကြောင်းပြချက်အားလုံးကိုကြီးတွေပါပဲ။ ငါသူတို့မှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါဟာရှည်လျားတဲ့အထူးအာရုံတွေကိုနောက်တဖန်မကြည့်တော့တာကြောင့်လူရွှင်တော်တွေကဒီကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အခြေခံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပရိသတ်ကိုသူတို့တကယ်သိကျွမ်းတဲ့လူတွေ၊ သူတို့စတိုင်ကိုသိတယ်၊ သူတို့ရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပေးပို့ပုံရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးသိတယ်။
ဒါကြောင့်ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအဆင့်မှာမင်းကအများကြီးအများကြီးပြောနိုင်တာပေါ့၊ ပြီးတော့မင်းမှာလွတ်လပ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ သင်စတင်ထွက်ခွာသောအခါသင့်အားလူများ၊ သင်မည်သည့်နေရာသို့လာသည်၊ သင်၏အခြေအနေသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမသိရှိပါ။ သင်အမှန်တကယ်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်လည်းဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိသောကြောင့်သင်ပြောလိုသမျှကိုပြောရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။
ကျောင်းဝင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံစင်တာတွင် Lowell Lecture Hall ကဲ့သို့ထိုင်ခုံများစွာပါ ၀ င်သည့်ကြီးမားသောအခန်းများကိုပြုလုပ်သည်။ ငါအနည်းငယ်ဘော်စတွန်န်းကျင်ဖျော်ဖြေ။ ငါကအနည်းငယ်ပိုလုပ်လေ့ရှိတယ်, ငါကျောင်းထူထပ်အတွက်အခါငါလျော့နည်းပါဝင်ပတ်သက်ရ။ ဟောင်ကောင်၏တတိယအထပ်တွင်ရှိသည့်ဟာသစတူဒီယိုရှိသည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအဲဒီမှာအတော်လေးအကြိမ်အနည်းငယ်ဖျော်ဖြေပါတယ်။ ဒါဟာအခန်းတစ်ခန်းကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့အရမ်းနီးစပ်တဲ့ဟာသကလပ်တစ်ခုမှာဒီလို ၀ င်ခွင့်ရှိတယ်။
ငါအဓိကအားဖြင့် Los Angeles မြို့တဝိုက်ဖျော်ဖြေ။ ငါကနေပေါ့ဘယ်မှာငါပါပဲ။ နွေရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီမှာတိုင်းအိမ်ကိုပြန်ဖို့သေချာတယ်၊ ဒါကြောင့် MIC တွေကိုထပ်ပြီးထိမိနိုင်တယ်။ အဆိုပါရယ်မောစက်ရုံတကယ်ကိုကြီးလှ၏။ သူတို့ကကျွန်တော့်အတွက်တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ငါထွက်ပြေးတုန်းကကျွန်တော့်ဟာသတွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အမျိုးမျိုးသောရှိုးပွဲများရုံကျပန်းနေရာများတွင်အဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်။ တ ဦး တည်းရုပ်ပြစာအုပ်စတိုးဆိုင်၏နောက်ကျော၌တည်ရှိ၏။ တ ဦး တည်းကဒီမှာစားသောက်ဆိုင်ဆင်တူတရုတ်စားသောက်ဆိုင်အထက်။ သင်ထိုင်ခုံများ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် amp များတပ်ဆင်နိုင်သည့်နေရာ။ ဒါကသေးအမည်ရှိနှင့်ပြဇာတ်ရုံထွက်မရောင်းနိုင်သူအတော်လေးသေးဟာသကလပ်ထွက်မရောင်းနိုင်သူလူရွှင်တော်များအတွက်လမ်းကြောင်းပါပဲ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာအကောင်းဆုံးအခန်းတွေကကောလိပ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့မင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိလို့သာပိုကောင်းအောင်ငါအနည်းငယ်ပိုကောင်းတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများသည်အမှန်တကယ်နားထောင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ကြသည်။ သူတို့သည် enter ည့်ခံရုံသာမကအရက်မူးရန်ဖြစ်သည်။ ဟာသကလပ်တွေအများကြီးကအနည်းဆုံးနှစ်ပုလင်းလောက်ပဲရှိတာမို့လူတိုင်းရယ်ပြီးကြပြီ။ အရာအားလုံးထဲက, ကောလိပ်လူအစုအဝေးတော်တော်လေးကောင်းသောဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
အဲဒီမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်က) ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးအဘို့, သူတို့ကိုထွက်ပိတ်ဆို့ပေမယ့် B) ဒီအလွန်ကောင်းသောပြန်တက်ရ, Stand-up ဟာသအတွက်သဘောထားကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ် brush လည်းရှိပါတယ်။ ထူးချွန်သူတွေအားလုံးကတူတူပါပဲ၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါအမြဲတမ်းဗုံးကြဲတယ်။ ဒါကသင့်ကိုပိုကောင်းစေတယ် သင်ပြန်ဖွင့်နိုင်သည်ကိုသင်နားလည်သည်။ ဒါဟာအားလုံးယုံကြည်မှုအကြောင်းပါ။ သငျသညျယုံကြည်မှု exude လျှင်, ဖြစ်ကောင်းပိုကောင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်။
မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွက်ငါပြပွဲမှာတက်ခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်မှာပြပွဲရဲ့အိမ်ရှင်တစ်ယောက်ကလူတိုင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးလူရွှင်တော်တစ် ဦး အနေဖြင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်၊ အာရှ - အမေရိကန်လူရွှင်တော်တစ်ယောက်အနေနှင့်၊ အလားတူအလားအလာများစွာရှိနေသည်။ အိုး၊ ဤနောက်လူရွှင်တော်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်! သောသင်ရရှိသမျှပါပဲ။ ၎င်းသည်မည်သူ့ကိုမဆိုမိတ်ဆက်ရန်အလွန်ထူးဆန်းသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကမတိုင်မီဖြစ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့်သင်တစ်ချိန်ချိန်ကရန်အသုံးပြုရမျှော်လင့်တစ်ခုခုပြန်ပြောပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့သူကငါနောက်ဆုံးရုပ်ပြရပ်တည်ချက်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်, ထိုလူရွှင်တော်ရှိရုပ်မြင်သံကြားခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ပြောပြောဘုံအရာပါပဲ။ သူကပြောပေမယ့်နောက်မှသူကနောက်ဆုံးရုပ်ပြရပ်တည်ချက်ကပြောသည်ခဲ့ဘူး, လူတိုင်းပါမယ်အကောင်းဆုံးရုပ်ပြပေမယ့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အေးဂျင့်များနှင့်မန်နေဂျာများအကောင်းဆုံးရုပ်ပြများထင်သောအရာကိုအကြောင်းကိုအမှန်တကယ်ပါပဲ။
ဒါဟာမျှတတဲ့အရာဖြစ်သည့်၎င်းရဲ့အနုတ်လက္ခဏာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ပြတွေအများကြီးပြပွဲနောက်ကွယ်မှမခံမရပ်။ ဒါဟာအလွန်ပုဂ္ဂလဒိ it’s္ ကြောင့် stand-up, ဟာသပတျဝနျးကငျြပြိုင်ဆိုင်မှုပြပွဲရှိသည်ဖို့လည်းလိုက်တယ်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်သောအခါငါကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါအိုးမဟုတ်, လူတိုင်းငါကဒီထိုက်တန်ပါတယ်ထင်။ ဒါဟာတော်တော်လေးဆိုးတယ်။ ငါကလူအများပြောတဲ့မိန်းကလေးပေါ့။ ငါချက်ချင်းပဲငါအများကြီးယုံကြည်မှုမရှိဘဲစင်ပေါ်မှာသွား။ , ကဆင်းကပြပွဲ၏ကျန်ပေးပို့သည်။
ဒါကဖြစ်ကောင်းငါ့အဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကဆိုးဝါးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ထဲမှာဒီဟာကငါကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အတွက်ကံမကောင်းတာပဲ။ ငါပြီးသားဤမျှလောက်ချွတ်ပစ်ခံခဲ့ရသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတစ်လမ်းအတွက်သူ့ကိုမှားယွင်းတဲ့သက်သေပြခဲ့ပါဘူး
သငျသညျအစဉျအမွဲ heckler ရပါသလား
ငါနုပျိုဘက်မှာအထူးသဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှုပ်ထွေးသွားမယ့်လူကိုကြောက်နေကြသည်, ငါ, ပျမ်းမျှထက်နည်းပါးလာ, ဖြစ်ကောင်း, ရ, အထူးသဖြင့် သူတို့ကအဲဒီမှာဝင်နှင့်ဤငယ်ရွယ်သောကလေးကိုရန်မလိုချင်ကြဘူး။ အချို့ရှိခဲ့သည် လူအများစုကဟက်ကာများပြောကြသည်။ ပျော်စရာကောင်းတယ် ပရိသတ်အားလုံးလူရွှင်တော်ရဲ့ဘက်မှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အတွက် heckler ကိုတုံ့ပြန်တာကကောင်းပါတယ်။ heckler ကတစ်ခုခုပြောရင်ချက်ချင်းသူတို့ကိုစော်ကားတာ၊ ပိတ်ခိုင်းတာတွေလုပ်ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်မှုဟာအဆင်ပြေပါတယ်။
လူတွေကသင်္ဘောပေါ်မှာပါ ငါသူတို့က၏အလိုအလျောက်ကြိုက်တယ်ထင်ပါတယ်။ ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်သင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှထိုအခိုက်အတန့်အားပြတ်တောက်ရန်မကြိုးစားသင့်ကြောင်းတည်ထောင်နေသည်။ အရမ်းဆိုးလွန်းခဲ့ဘယ်တော့မှရဲ့။ ဒါဟာအမြဲတမ်းပျော်စရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါငါ့ကို heckle ဖို့လူတွေကိုအားပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျိန်းသေအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကတော့ပြီးခဲ့သည့်မတ်လကနောက်ဆုံးရုပ်ပြရပ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ပြအားလုံးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးထိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုရရှိခြင်း၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောဟာသရုပ်တုများဖြစ်သောတရားသူကြီးသုံး ဦး နှင့်စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်ခြင်း၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်သည့်အလွန်အေးမြသောဝေဖန်မှုများနှင့်မြင့်မားသောလောင်းကြေးများကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တိပ်ခွေဖြစ်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၌ဖြစ်ခြင်း၏အလားအလာသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါကျိန်းသေအချို့သောလမ်းအတွက်ဟာသလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ငါ stand-up ဟာသလုပ်နေတယ်, ငါမဆိုကျွမ်းကျင်မှုကဲ့သို့၎င်းမှာပိုမိုကောင်းမွန်သောရဖို့လိုအပ်ကြောင်းငါသိ၏။ ငါဖြစ်ကောင်းပြန် Los Angeles မှာဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်နှင့်ငါကျော်ဟိုမှာတတ်နိုင်သမျှပြုပါနှင့်ဖျော်ဖြေရေး, အရေးအသား, သရုပ်ဆောင်, သမျှနှင့်အတူဖြတ်သန်းသောဟာသနှင့်ဟာသအရေးအသားနှင့်အတူငါတတ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဤအရာတွေအများကြီးနှင့်အတူအစစ်အမှန်လမ်းကြောင်းမရှိ, ဒါကြောင့်ငါ့နည်းဗျူဟာရုံအလွန်ကျယ်ပြန့်ပိုက်ကွန်ချ။ ငါရနိုင်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ မလွှဲမရှောင်, အာရှ - အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသို့၎င်း၊ ထိုအရာကိုခွင့်ပြုပေးသည့်ဟောလိဝုဒ်၏မူဘောင်အတွင်းသို့ကူးရေးသောအရာများစွာမရှိပါ။
ငါလုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တာကအရာရာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဦး ဆောင်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပါ။ ဒါမှငါပါ ၀ င်နိုင်မယ်၊ ဟာသနဲ့ဟောလိဝုဒ်မှာပါ ၀ င်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါဝင်နိုင်တယ်။ ။